၂၇ နေ ့အတွတ် လူစာရင်းပေးရန်- စာမျက်နှာ2- MYSTERY ZILLION
၂၇ နေ ့အတွတ် လူစာရင်းပေးရန်
တိုတိုလိပ်ရစ်.. အဲယောင်လို့.. ပုရစ်.. အနော်လဲ လာမယ်နော်. Software တွေယူခဲ့နော်.. :P
(27 ရက်နေ့လာမည့် မန်ဘာများ)
နာမည်စာရင်း၀င်ထားသောမန်ဘာအရေအတွက်အတိုင်း ကျနော် software & ebook collection dvd များပြုလုပ်လာခဲ့မှာမို့ ယနေ့ည 10 နာရီနောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းလာပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....။
ကိုပုရစ်ရေ အနော်စိတ်ဝင်စားသွားပြီ အနော်လာခဲ့မယ် အလုပ်မအားတဲ့ကြားကမအားအား အောင်လာခဲ့မယ် အနော်အတွက်လဲ တစ်ခွေပေးနော်။ ရအောင်လာခဲ့မယ်
ကိုအာသောက ဆီက ယနေ ့တွင် 10000 ထပ်မံရရှိ။
ဇူးဇူးဆီတွင် လက်ရှိအားလုံးပေါင်း 38000 ရှိကြောင်း
မင်ဘာတွေ့ဆုံပွဲ ၂၆၊ ၂၇ ရက်နေ့တွေမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင်စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဘယ်အချိန်အထိလည်း မသိဘူးနော်...နောက်ကျမှာ ဆိုးလို့ပါနော်:((
အဆင်ပြေပြေ ချောချောမွေ့မွေ့ အောင်မြင်စွာပြီးစီးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ လာချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုမှမလာနိုင်လို့ပါ။
ဇူးဇူးဆီတွင် လက်ရှိအားလုံးပေါင်း 38000 ရှိကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ကိုဇူးဇူးရေ ကျွန်တော် ၅၀၀၀ ကျပ် (ငါးထောင်) ထည့်ပါ့မယ်။ ရန်ကုန်ကအသိတစ်ယောက်ကို ကိုဇူးဇူးဆီလာပေးခိုင်းပါ့မယ်။ ကျွန်တော့်ဖုန်းနံပါတ် pm ပို့ထားပါတယ်။
လာမည့် လူစာရင်းအရ 29 ယောက်ပဲရှိပါတယ်....
ပိုပိုလိုလို 35 ချပ်ကူးခဲ့ပါမယ်......(DVD စာရင်း ဒီမှပိတ်ပါဘီ)
အသုံးတည့်ကြမယ်လို့ ယူဆပါတယ်....ပေးချင်တာတော့ ကျနော့်မှ စုဆောင်းထားသမျှ Software တွေအားလုံးကိုဘဲဗျ.... စုစုပေါင်း 500 ဂစ် HardDisk နှစ်လုံးစာအပြည့်ရှိတယ် ... လောလောဆယ် လပိတ််ရက်ဖြစ်နေတော့ အခု အသုံးများတဲ့ Software တွေချည်း DVD တစ်ချပ်နဲ့ဆန့်အောင် စုစည်းပေးထားပါတယ်.... အီးဘွတ်တွေလည်း ပါတယ်ဗျ... သင့်သလိုသုံးကြပေါ့နော့...
ဘာတွေပါလည်းဆိုတော့ ရရင်သိလိမ့်မယ်လေ.. :d
အသုံးတည့်ကြမယ်လို့ ယူဆပါတယ်....ပေးချင်တာတော့ ကျနော့်မှ စုဆောင်းထားသမျှ software တွေအားလုံးကိုဘဲဗျ.... စုစုပေါင်း 500 ဂစ် harddisk နှစ်လုံးစာအပြည့်ရှိတယ် ... လောလောဆယ် လပိတ််ရက်ဖြစ်နေတော့ :d အခု အသုံးများတဲ့ software တွေချည်း dvd တစ်ချပ်နဲ့ဆန့်အောင် စုစည်းပေးထားပါတယ်.... အီးဘွတ်တွေလည်း ပါတယ်ဗျ... သင့်သလိုသုံးကြပေါ့နော့... :d
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...ကိုမင်းသားတစ်ယောက် ဒီထက်ပိုပြီး လှူနိုင် ပေးနိုင် မျှေ၀နိုင် တဲ့ လူဖြစ်ပါစေဗျာ..:d:5::5:
ကဲ 26 ရက်နေ့ပွဲပြီးသွားဘီ...ဓါတ်ပုံလေးတွေ တင်ကြပါဗျိုး...သိချင်တယ်
ဘယ်နှယ့် it သမားတွေ မြန်ရမှာကို နှေးလှချည့်လား... :d
၂၇ရက် လာမည့်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်အရင်းနဲ့ပေးထားတဲ့သူများ နစ်နိမ်းနဲ့ထပ်နေရင်ပြောပေးပါဦး။ ကျန်ရှိနေသူများစာရင်းဆက်ပေးကြပါခင်ဗျား။ ယနေ့ညနေထိရသောစာရင်းပါ။
[FONT="]19.[/FONT][FONT="]ကိုကီလို ၏ ဇနီး[/FONT]
[FONT="]21.[/FONT][FONT="]Soe Gyi (မသေချာ)[/FONT]
ဟုတ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံလေးတွေ တင်ပေးပါဥိး ကြည်.ချင်လို.ပါ။ အနော်တို.ကမသွားနိုင်တဲ.သူတွေမို.လို.
၂၇ရက်နေ့တွင် မိုးမရွာပါက ချစ်သူများကျွန်းတွင်လုပ်မည်။ မိုးရွာပါက အမိုးအကာရှိသည့် မျှော်စင်ကျွန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြုလုပ်ပါမည်။
မယ်ရစ်ရေ..ဓါတ်ပုံတွေက ...တစ်ယောက်တစ်ပေါက်နဲ ့ရိုက်ထားလို ့..လုံး၀မရတေးပါဖူး
နာ ့စု ပြီး..၂၇ ရက်နေ ့ရော..အကုန်လုံးတင်ပေးထားပါ ့မယ်ကွာနော်။
အမြန်ဆုံးတင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ ့မယ်။ ။
ရပါတယ်ညီလေး ဇူဇူးရယ်...... ရရင်တော့ တင်ပေးလိုက်ဦးနော်... ကိုတို့က အေ၀းကဆိုတော့ ဓါတ်ပုံလေးပဲကြည့်ရမှာ ညီလေးရ.......
မင်ဘာတွေ့ဆုံပွဲ ၂၇ ရက်နေ့ ပြုလုပ်မည့်အချိန်မှာ နေ့လည် ၁၂ နာရီ တွင်စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ခန့်မှန်းပြီးဆုံးချိန်မှာ နေ့လည် ၂နာရီ မိနစ်၃၀ ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်ပါသည်။ မပျက်မကွက် တက်ရောက်ပေးကြပါရန် အလေးအနက်ထား၍ ပြောကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
ကိုစိုင်းနော်.. မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေ ကောင်မလေးတွေနဲ့ သူကိုယ်တိုင်လာတာကို မျက်မြင်ကို တစ်ဘက်ကို နတ်သမီး တစ်ယောက်စီခြံရံလာပြီးတော့များ.. ဟွန်း..
ကျနော်တို့ကိုလဲ မပေးဘူး .......
၂၆ရက်နေ့လာတဲ့လူတွေကျ ရဘူး ....
ကိုညတို ့အတွဲ အမိုက်ဆုံးပဲဟေ ့...:5::5::5:
ဘာလဲ ...နေ ့မီး အိမ်နဲ ့...ညမီးအိမ်။
စတာနော်..စိတ်မဆိုးနဲ့:d:d:d:d
နင်တော့ မှားနေပြီဟဲ့.. မီးအိမ်ရှင်နဲ့ ညမီးအိမ်.. ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ ငဇူးမ.. :d
မယ်ရောင်စိန် = 5000
မယ်ပုရစ် = 10000
စိုးကြီး = 3000
asoka = 10000
ကိုကြည် ့ရှောင် = 3000
ko kyaw phyo = 5000 (မလောက်ရင်..ထပ်ထည် ့ပါမယ်တဲ ့ခင်ဗျာ )
မယ်ပုရစ်ရေ..မတတ်နိုင်ဖူး..နင့်က အကောင်းနဲ ့ရေးထားပေ ့မယ်လည်း။
ငါတင်မယ် ့အချိန်ကြီးဆိုတော ့...အခွက်ကြီးကို ရိုက်ထဲ ့လိုက်သလို ပါပဲကွာ..အဟင့် :2:။
နေရင်းထိုင်ရင်း..ကိုယ် ထမင်းကိုယ်စားပြီး...သူများအပြောခံရမှာကြောက်လို ့ပါဟ။
ငါပဲကြီးလှော်ဆားညှပ်..ဟင် ့....တေချင်တယ်။ ။ :2::2::2:
ကိုဇူးဇူးအောင် ခဗျား အဲလို အစီအစဉ်တွေကို တစ်လလောက် ကြိုပြီး ကြောငြာပါလား။ မလာနိုင်ရင်တောင်မှ ကူညီမှာ ပေါ့။ ကျွန်တော်က တရုတ်မှာဆိုတော့ mz အဖွင့်တွေမရှိဘူး။ တစ်ယောက်တည်း နွဲရတယ်။ ပိုနေရင် ပို့ပေးမှာပေါ့ ကြိုပြောပါနော။ :d